'Taabota Waaqarraa bu'e': 'Bataskaanni wanta akkanaa kana balaaleffachuu qabdi' - BBC News Afaan Oromoo
Oduun 'Taabonni naannoo Koyyee Facceetti Waaqarraa bu'e' jedhu erga dhaga'amee booda dubbii ijoo marsaalee hawaasummaa ta'eera.
Dhimmuma kana qulqulleeffachuuf BBC Afaan Oromoo aangawoota naannichaa fi mana amantaa Ortodoksii keessaa namoota dubbisuun gabaasa kana qindeessineerra.
Bulchaan aanaa Koyyee Faccee Obbo Naannoo Alamuu waan BBC'tti himan, ''wanti miidiyaa hawwaasummaa irratti haasa'amaa jirus dubbii sobaati," jedhan.
"Taabonni mana qotee bulaa galeera, kan gale dukkanaan ture. Dubbii kanas gara mana murtiitti geessineerra.
Akka Obbo Naannoon jedhanitti wanti kun kan mana qotee bulaa gale torban lamaan duradha.
Kaayyoo dubbii kana duuba jiru maal akka ta'e warra waan kana adeemanii odeessaa jiran waamnee qorachaa jirra kan jedhan aanga'aan kun, manni maree aanichaas dhimma kana irratti kora taa'uuf har'atti beellama qaba jedhu.
"Dubbii kana namni maaliif haala kanaan odeessuu barbaade? Miidiyaa hawwaasummaa irrattis maaliif oliifi gadi oofamaa jira? kanneen jedhan poolisiinis dhimmicha qabatee qorachaa jira".
Kaayyoon isaa lafuma saamuudhaaf, wanta biraa miti...
'Taabonni Waaqarraa bu'e' jedhamee odeessisisuus ta'e taabota mana nama dhuunfaa galchuun sababii barbaachiseef yaada isaanii yeroo kennan bulchaan aanichaa: "Kaayyoon isaa lafuma saamuudhaaf, wanta biraa miti.
Kaayyoon isaa maqaa amantaatiin lafa qote bulaa qabachuudhaaf. Kaayyoon kanaan ala ta'e hin jiru. Kana akka aanaattis, akka bulchaattis gamaggamnes kanuma," jedhan.
Maqaa amantichaa hin xureessuu...?
Hojiin akkasii kun maqaa amantaa kanaa xureessa jechuudhaan hordoftoonni amantichaas mufii qaban dhiyeeffachaa jiru jedhan Obbo Naannoon.
"Namoonnis kun attamitti ta'a? Mana qote bulaatti akkamiin gala? Amantaan keenya maaliif nu jalaa xuraa'a?" jechuun gaafatu jedhan.
Kun amantaa keenya ni balleessa jechuudhaan hedduun mufii qaban gara aanaa isaaniitti galfatanii akka jiran kaasanii Obbo Naannoon, isaan waliin taanees mariyachaa jirra jedhan.
Luba Balaay Mokonnin dhimma kana irratti yaada kennaniin, dubbiin akkasii kun amantii kana miidhudhaa jedhanii dubbichi dhugaa ta'uu hin danda'u jedhan.
Wanti akkasii nama goyyoomsuudha, kan jedhan Lubi Balaay, "Dhuguma Waaqayyo raajii hojjechuu ni danda'a'' jedhu.
Raajii kan hojjetu garuu namoota akkanaa fedhii foonii isaanii duuba godhatanii of fuuldura sagalee Waaqaa qabatanii deeman kana osoo hin ta'iin, warra dhugaadhaan Waaqa amane irratti Rabbi raajii kan hojjetu," jedhu.
Rakkoon kanaan dura ture mootummaan lafa taabota itti dhaabbatan fudhadhaa jedhee yeroon kenne akka hin jirre ta'uu kaasanii, akkuma amma godhame kanatti 'taabonni achitti lafa keessaa argame' ykn 'waaqarraa bu'e' jedhameetuma babal'achaa ture jedhan.
"Kaan ammoo qote bulaadhumati itti amanee lafa kenna. Ani isa qote bulaan itti amanee lafa kennu mormii hin qabu. Sirriidhamoo sirrii miti jedhamee yaa ilaalamu malee sobni achi keessa hin jiru jechuudha.
Amma lafa keessaa argame, waaqaa bu'e kan jedhu kun dubbii dhugaa miti. Dubbii amanamu miti."
Kana ofii isaanii amanuu akka hin dandeenye kaasanii abbootii amantaa keessaa phaaphaasota gaggaafataniis isaanis kan hin beekne ta'uuf miidiyaa hawwaasummaa irraa akka dhaga'an dubbatu jedhan.
'Bataskaannillee jara kana himachuu, balaaleffachuu qabdi'
Gama amantaa maqaa balleessuufi dhiibbaa wanti akkasii kun hordoftoota Ortodoksii irratti qabaachuu danda'us Luba Balaay kan jedhan qabu.
"Himannaa kana mootummaa qofa osoo hin ta'iin, Bataskaannillee jara kana himachuu qabdiin jedha ani. Wanta Bataskaana keenya maqaa xureessu hojjechuu isaaniitiif Bataskaannillee balaaleffachuu qabdi."
Himannaa qofaan osoo hin taane gadi ba'anii miidiyaadhaanillee balaaleffachuu qabu ejjennoo jedhu akka qaban himu Lubi Balaay.
Akka Lubi Balaay jedhanitti kaayyoon kana gochuu kun mootummaan lafa waan nuuf hin kennineef tooftaa ittiin amantii baballisuuti jedhanii yaadu.
Namoonni kana godhan kun mootummaan amantaa baballifadhaa jedhee lafa nuuf hin kennu waan ta'eef akkuma kaan dura godhaa turan tooftaadhuma kana malee filannoo biraa hin qabnu yaada jedhu kaasu. "Ani ammoo kanan jedhu, mootummaa amansiisuun ni danda'ama.
Keessattuu durillee haa ta'u amma kan jiru mootummaa dimokiraasiiti waan ta'eef namni nama dhaga'a. Kanaafuu kun sirrii mitin jedha."
"Kaayyoon isaa beekamaadha. Achitti bataskaanni yoo ijaarame achumaan naannoo sanatti mana jireenyaa ijaarratu. Kanumaafidha waan biraatiif miti. Kun beekamaadha. Kanuma argaa turredha," jedhan Lubi Balaay.
Uummannis akka hin dogoggorre gorsuufi barsiisuu qabdi kan jedhan Luba Balaay, keessumattuu Manni Amantaa Ortodoksii Waliigalaa Itoophiyaafi Hagara-Sibkatiin Finfinnee qindaa'uudhaan tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuu qabu yaada jedhu kaasan.
Roobni hamaan ammas Moozaambik haleele